आमाको भूमिका र बाबुको हैसियत – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
आमाको भूमिका र बाबुको हैसियत
२०७१ जेष्ठ १५, बिहीबार ०१:०७ गते
कलियुगका मानिसहरु भन्ने गर्छन्– “संसारका मानवहरुमा सबैभन्दा बढी सम्मान गर्न लायक मानिस भनेका जन्म दिने आमाबाबु हुन् ।” यस भनाइमा कति सत्यता छ कुनै लेखाजोखा नगरी धेरै मानिसले यसो भन्न शुरू गरेको लामो समय बितिसकेको छ । के साँच्चै जन्म दिने प्रक्रियामा सामेलहरु बाबु र आमा हुन् ? बाबु भनेको के हो ? आमा भनेको के हो ? बाबु हुन के–के विशेषता हुनुपर्छ ? आमा बन्न के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ वा विशेषता हुनुपर्छ ? शायद, यो शीर्षकमा छलफल गर्दा र एउटा निष्कर्ष निकाल्दा सबैका लागि कल्याण नै हुने छ ।
हिजोआज पनि धेरै मानिसहरु “शरीरभित्र वीर्य भएको र त्यो वीर्यलाई सम्भोगको माध्यमबाट महिलालाई गर्भवती बनाउन सक्षम पुरूषलाई “बाबु” वा “पिता” भन्ने नाम दिएर झुक्किएका छन् । महिलासँग सम्भोग गर्न सक्ने पुरूष हुन सक्छ, तर “बाबु” हुन सक्दैन । बाबु भनेको चरित्र हो । कर्मको नाम हो, कर्तव्य पालनको प्रतीक हो । महिलासँग समागम गर्न सक्ने पुरूष हुन वा बन्न सजिलो छ, तर बाबु बन्न त्यति सजिलो छैन । बाबु भनेको त्यो पुरूष हो, जो सन्तान जन्माउने प्रक्रियामा आफैँ सामेल भएको छ वा अरुले जन्माएको सन्तानलाई पनि सम्पूर्ण रुपले हेरचाह गरेर नैतिक मूल्य र मान्यता सिकाएको छ, सिकाउँछ, बाँच्न र बचाउन सिकाउँछ । आफू अनुशासनमा बसेर सन्तानलाई अनुशासन सिकाउँछ, मानवता पढाउँछ र सम्पूर्ण रुपले कर्तव्यपथमा चल्न सिकाउँछ । यस्ता कार्य गर्ने र गर्न सिकाउने पुरूष “बाबु” हो । सन्तान जन्माउने प्रक्रियामा सामेल तर बाबुको चरित्र नभएका मानवहरु सिर्फ पुरूष हुन् ।
उदाहरणका लागि कुनै पुरूषको घरमा सन्तान जन्मियो । पुरूष दिनभरि केही काम गर्दैन । छोराछोरीको पढाइलेखाइमा कहिल्यै चासो दिँदैन, तास, जुवा, रक्सी र वेश्या उसको दिनचर्या बनेको छ । छोराछोरीलाई कहिल्यै हौसला दिँदैन, बिरामी हुँदा औषधिको जोहो गर्दैन । यस्ता खालका पुरूष सिर्फ पुरूष हुन्, बाबु होइनन् । अर्कोतर्फ, छोराछोरीलाई आवश्यकताभन्दा ज्यादा सुविधा दिएर परावलम्बी बनाउँछ, धनको दुरूपयोग गर्न सन्तानलाई सिकाउँछ, सामाजिक कानुनको विपरीत चल्न सिकाउँछ, अरुलाई हेप्न, दम्भ प्रदर्शन गर्न सिकाउँछ, त्यो पुरूष पनि सिर्फ पुरूष हो, बाबु होइन । यो प्रकारको पुरूषलाई कतैकतै गैरमानव पनि भन्ने गरिएको छ ।
मानव संसारमा चर्चा पुरूषको मात्रै भएको छैन, महिला र आमाको पनि भएको छ, हुन जरूरी पनि छ । जुन ढंगले मानिसहरु पुरूष र बाबुको परिभाषामा झुक्किएका छन्, त्यसैगरी महिला र आमाको परिभाषामा पनि झुक्किएका छन् । यसको परिणाम आमाले पाउनु पर्ने सम्मान महिलाले पाएका छन् र त्यस्तै, आमाहरु पीडाको दलदलमा भासिएका पनि छन्, रगतको आँसु पिएर रोएका पनि छन् । बच्चालाई नौ महिनासम्म पाठेघरमा राख्न सक्ने जुन कुनै महिलालाई पनि मानिसहरुले आमाको संज्ञा दिएर झुक्किएका छन् । सम्भोग कार्यका लागि प्राकृतिक रुपमा प्राप्त स्त्री योनी र बच्चा हुर्काउनका लागि उपलब्ध पाठेघर हुँदैमा वा ती दुवै अंग र पुरूषको सहयोगबाट बच्चा जन्माउँदैमा कुनै पनि महिलालाई आमा भन्ने गरिएको छ । यो बिलकुल गलत र अन्जानमा गरिएको गलत परिभाषा हो । पाठेघर, योनी र अन्य अतिरिक्त केही बाहिरी अंग हुनुलाई र तिनको मद्दतबाट बच्चा जन्माउन सक्ने कुनै महिलालाई आमा भन्नु सरासर गलत हो, कमजोर बुझाइ हो ।
आमाको परिभाषा व्यापक छ, फराकिलो छ । जसरी बाबु बन्न खास विशेषता चाहिन्छ र गुण चाहिन्छ, त्यसैगरी आमा कहलाउन पनि खास–खास गुण र विशेषता चाहिन्छ । बच्चा जन्मिएपछि ज्यादा तातो र ज्यादा चिसोबाट बच्चालाई जोगाउनुपर्छ । ठीक समयमा खुवाउनु, दिसापिसाब गराउनु, लुगा लगाइदिनु, खोलिदिनु, नुहाइदिनु, ठीक समयमा औषधि खुवाउनुपर्छ, आफूले जानेको शैक्षिक ज्ञान दिनुपर्छ । नैतिकता र अनुशासन सिकाउनुपर्छ । यस्ता कर्तव्य पालना गर्ने महिलालाई दुनियाँभरिका विद्वान्हरुले आमाको परिभाषा दिएका छन् । शारीरिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले गरिएका कार्य र त्यसको फलका रुपमा प्राप्त सन्तान जसलाई मरोस् वा बाँचोस्को वास्ता नगरी बेवारिसे अवस्थामा छाडेर निजी स्वार्थमा डुब्ने महिला हुन्छन्, तिनलाई आमाको संज्ञा दिन मिल्दैन । ती सिर्फ महिला हुन् जसको आवश्यकता प्रकृतिको नियमअनुसार उत्पत्ति र विनाशका लागि खाँचो हुन सक्छ । तर आमाको परिभाषा, आवश्यकता र मह¤वका हिसाबले हुन सक्दैन । जसरी पुरूष र बाबुको परिभाषाबीच अन्तर छ, त्यसकै हाराहारीमा महिला र आमाको परिभाषामा अन्तर छ ।
आज नेपाली नागरिक समाजका माझमा पाकेटमारको उपस्थिति देखिन्छ । कुनै पनि बालक जन्मँदैमा पाकेटमार भएर जन्मँदैन । उसलाई विभिन्न खाले नकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरिन्छ । यस्तो नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न उसलाई जन्म दिन सहयोग गर्ने महिला र पुरूषको भूमिका रहेको हुन्छ । जन्माउन सहयोग गर्ने महिला र पुरूषले बाबु र आमाको भूमिका निर्वाह गरेको र सकारात्मक शिक्षादीक्षा दिएको अवस्था हुँदो हो त बालक पाकेटमारका रुपमा विकसित हुने थिएन । चोर, पाकेटमार र डाँका मात्रै होइन, हिजोआज नेपाली समाजमा वेश्याको उपस्थिति निकै बाक्लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अन्तिम ठूलो दोष सरकारलाई दिन सकिएला, त्यसको हाराहारीको दोष सामाजिक अन्य संरचनालाई पनि दिन सकिएला । तर, पहिलो दोष तिनै महिला र पुरूषको हो, जसले तिनलाई जन्माउन भूमिका निर्वाह गरे र आफूलाई आमा र बाबु दाबी गरिरहेका छन् । तर, महिला र पुरूषमै सीमित रहे । आमा र बाबु बन्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । बाँच्ने सन्तानका लागि हो । बाँच्ने अरुका लागि हो । बाँच्ने आमा भएर हो । बाबु भएर हो ।
घुमाइफिराइ भन्न र लेख्न जरूरी छैन, समागमका लागि उपलब्ध लिंग र योनीका धनी महिला र पुरूषहरु सिर्फ पुरूष र महिला हुन्, जसले मात्र सम्भोग गर्दछन् । आमा बाबु ती हुन्, जसले आमा र बाबुको परिभाषाअनुरुप कार्य गर्दछन् र समाजलाई ठीक दिशा प्रदान गर्न मद्दत गर्दछन् । आमाबाबु र महिला–पुरूषमा फरक छ, धेरै फरक छ । आमाबाबु सम्मानयोग्य हुन्छन् । महिला–पुरुष सम्मानयोग्य नहुन पनि सक्छन्, किनकि मानव समाज विकासक्रममा जति सहयोग आमाबाबुबाट प्राप्त हुन्छ, त्यति सहयोग कुनै पनि हालतमा महिला–पुरूषबाट प्राप्त हुन सक्दैन ।